भारत: ८८ वर्ष अगाडिको एउटा हत्याकाण्ड जसले विश्वभरि सनसनी फैलायो « Rara Pati
भारत: ८८ वर्ष अगाडिको एउटा हत्याकाण्ड जसले विश्वभरि सनसनी फैलायो
बिबिसी । सन् १९३३ नोभेम्बर २६ तारिखको कुरा हो जब खादी अथवा घरमा बुनिएको कपडा लगाएका एक व्यक्ति कलकत्ताको भिडभाडयुक्त हावडा रेलवे स्टेशनमा उभिरहेका युवा जमिनदार अमरेन्द्र चन्द्र पाण्डेयसँग ठोक्किएर अगाडि बढे । २० वर्षीय अमरेन्द्रलाई दुख्यो र केहीले घोचे जस्तो महसुस भयो ।
लगभग चिच्याउँदै अमरेन्द्रले भनेः ‘कसैले मलाई केही चिजले घोचेर गयो ।’
अमरेन्द्र आफ्ना केही आफन्तसँग पारिवारिक साम्राज्य रहेको पाकुड (अहिले झारखण्डमा पर्ने क्षेत्र) गइरहेका थिए । घटनापछि उनले आफ्नो यात्रा जारी राख्ने निर्णय गरे ।
तर केहीले घोचे जस्तो थाहा भएपछिसँगै भएका आफन्तहरूले उनलाई कलकत्तामै बसी रगत परीक्षण गराउन सुझाव दिए ।
त्यही बेला अचानक रेलवे स्टेशन आइपुगेका अमरेन्द्रभन्दा १० वर्ष जेठो उनका सौतेनी दाइ बेनोयेन्द्रले त्यसलाई सामान्य घटना भन्दै अघि बढ्न भने ।
आठ दिनपछि मृत्यु
तीन दिनसम्म ज्वरोले च्यापिरहेपछि अमरेन्द्र कलकत्ता फर्किए । परीक्षणका क्रममा त्यहाँ एकजना चिकित्सकले उनको पाखुरामा सुईले घोचेको देखे ।
अमरेन्द्रलाई ज्वरो बढिरह्यो र उनलाई सुजन भयो अनि फोक्सोमा समस्या भएको सङ्केत देखिन थाल्यो ।
डिसेम्बर ३ मा अमरेन्द्र कोमामा गए र त्यसको भोलिपल्ट बिहान उनको मृत्यु भयो । चिकित्सकहरूले उनको मृत्यु निमोनियाका कारण भएको बताए ।
यसरी बनाइएको थियो महात्मा गान्धीको हत्या गर्ने योजना
तर मृत्युपछि आएको प्रयोगशाला रिपोर्टबाट उनको रगतमा प्लेग गराउने यर्सिनिआ पेस्टिस नामक ब्याक्टेरिआ भएको थाहा भयो ।
मुसा तथा उपियाँबाट फैलने प्लेगका कारण भारतीय उपमहाद्वीपमा सन् १८९६ देखि १९१८ को बीचमा एक करोड २० लाख मानिसले ज्यान गुमाइसकेका थिए ।
त्यसपछि सन् १९२९ देखि १९३८ को अवधिमा प्लेगबाट ज्यान गुमाउने मानिसको सङ्ख्या करिब पाँच लाख रह्यो ।
अमरेन्द्रको मृत्युभन्दा तीन वर्ष अघिसम्म कलकत्तामा प्लेगको एउटा पनि घटना देखिएको थिएन ।
जमिनदार परिवारका उत्तराधिकारीको यो सनसनीपूर्ण हत्याकाण्डले ब्रिटिश साम्राज्य भएको भारत र त्यहाँभन्दा टाढा रहेकाहरूको समेत ध्यान तान्यो ।
विश्वभरिका पत्रपत्रिकामा त्यो घटनाबारे लगातार समाचार छापिए । कतिपयले त्यसलाई ‘आधुनिक विश्वमा व्यक्तिगत जौविक आतङ्कवादको शुरूवाती घटना’ भने ।
टाइम म्यागजिनले त्यसलाई ‘जर्म मर्डर अर्थात्‌ कीटाणुद्वारा गरिएको हत्या’ को सङ्ज्ञा दियो । सिङ्गापुरको स्ट्रेट्स टाइम्सले त्यसलाई ‘पङ्क्चर्ड आर्म मिस्ट्री’ भन्यो ।
कलकत्ता प्रहरीले घटनाबारे गहन अनुसन्धान गरेपछि त्यसमा एउटा खतरनाक षड्यन्त्र भएको थाहा पायो ।
त्यो षड्यन्त्रमा कलकत्तादेखि १,९०० किलोमिटर टाढा पर्ने बम्बे (अहिलेको मुम्बई) स्थित अस्पतालबाट प्राणघातक ब्याक्टेरिआ निकालिएको कुरा सामेल भएको देखियो ।
यो अपराधको केन्द्रमा पारिवारिक सम्पत्तिलाई लिएर दाजुभाइबीच रहेको द्वन्द्व देखियो ।
पाण्डेय दाजुभाइबीच उनीहरूका बुवाको मृत्युपश्चात्‌ कोइला तथा ढुङ्गाखानीका लागि चर्चित पाकुड साम्राज्यलाई लिएर सङ्घर्ष चलिरहेको थियो ।
त्यसलाई सत्य र असत्यबीचको लडाइँका रूपमा सञ्चारमाध्यमहरूले प्रस्तुत गरिरहेका थिए ।
एउटा विवरणअनुसार ‘स्थानीय बासिन्दाका प्रिय अमरेन्द्र चन्द्र पाण्डेय उच्च नैतिकता भएका एक सदाचारी युवा थिए जो उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहन्थे ।’
अर्कोतर्फ बेनोयेन्द्र ‘मदिरा पिउने कुलत भएका अनि मोजमस्तीले भरिएको जीवन जिउनका लागि चर्चित थिए ।’
षड्यन्त्रको तानाबाना एक वर्षअघि नै
अदालती कागजपत्रका अनुसार ‘अमरेन्द्रको हत्या गर्ने षड्यन्त्र सम्भवतः सन् १९३२ मा गरिएको थियो जब बेनोयेन्द्रका नजिकका साथी डा. तारानाथ भट्टाचार्यले प्रयोगशालामा प्लेग गराउने ब्याक्टेरिआको कल्चर निकाल्ने प्रयत्न गरे । तर त्यो प्रयत्नमा उनी सफल हुन सकेनन् ।’
हुन त यो दाबी विवादित रहेको छ । तर केही विवरणअनुसार बेनोयेन्द्रले सम्भवतः सन् १९३२ को गर्मीयाममा अमरेन्द्रको हत्या गर्ने पहिलो प्रयास गरेको हुनुपर्छ ।
ब्रिटिश स्वास्थ्य अधिकारी डा. लामबर्टको एउटा रिपोर्टअनुसार दुवै दाजुभाइ एउटा हिल स्टेशनमा यताउता गरिरहेका बेला ‘बेनोयेन्द्रले एउटा चश्मा निकालेर अमरेन्द्रलाई लगाउन थाले र सो क्रममा उनको छाला कोतारियो ।’
त्यसको केही समयपछि अमरेन्द्र बिरामी भए । त्यो चश्मामै ब्याक्टेरिआ भएको आशङ्का गरियो ।
त्यसपछि परीक्षण गराउँदा अमरेन्द्रलाई टिटानस भएको बताइयो र उनलाई त्यसविरुद्ध सुई लगाइयो ।
डा. लामबर्टको रिपोर्टअनुसार बेनोयेन्द्र कथित रूपमा तीनजना चिकित्सक लिएर आए ताकि उनका भाइको उपचारमा परिवर्तन गर्न सकियोस् । तर तिनीहरूको सेवा लिइएन ।
तर त्यसपछि जे भयो त्यो एउटा यस्तो हत्याकाण्डको षड्यन्त्र थियो जुन सनसनीपूर्ण र त्यो समयको भन्दा धेरै पहिलाको घटना थियो ।
बेनोयेन्द्रले जति बेला पैतृक सम्पत्तिको अधिकार हासिल गर्नेतर्फ कदम बढाएका थिए त्यति बेला उनका साथी भट्टाचार्यले प्लेग गराउने ब्याक्टेरिआ बनाउने प्रयास चारचोटि गरेका थिए ।
सन् १९३२ को मेमा भट्टाचार्यले बम्बेमा अवस्थित हेफकिन इन्स्टिट्युटका निर्देशकसँग सम्पर्क गरे । त्यो एकमात्र प्रयोगशाला थियो जहाँ ब्याक्टेरिआको कल्चरलाई राखिएको थियो ।
इन्स्टिट्युटका निर्देशकले बङ्गालका सर्जन जनरलको अनुमतिविना कल्चर उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरे ।
सोही महिना डा. भट्टाचार्यले कलकत्तामा एक चिकित्सकसँग सम्पर्क गरी प्लेगको उपचार पत्ता लगाएको दाबी गरे अनि कल्चरको प्रयोग गरेर परीक्षण गर्न चाहेको उनले बताए ।
अदालती कागजपत्रका अनुसार चिकित्सकले उनलाई प्रयोगशालामा काम गर्ने अनुमति दिए पनि हेफकिन इन्स्टिट्युटबाट प्राप्त कल्चरलाई राख्ने अनुमति दिएनन् ।
डा. लामबर्टका अनुसार ‘भट्टाचार्यको काम रोकिन पुग्यो किनकि त्यो कल्चरमा ब्याक्टेरिआ बन्न सकेन ।’
त्यसपछि सन् १९३३ मा भट्टाचार्यले एकचोटि फेरि कलकत्ताका चिकित्सकलाई हेफकिन इन्स्टिट्युटलाई पत्र लेख्न मनाए । पत्रमार्फत् भट्टाचार्यले सो इन्स्टिट्युटमा काम गर्नका लागि अनुमति मागे ।
सोही वर्षको गर्मीयाममा बेनोयेन्द्र बम्बे गए जहाँ उनले भट्टाचार्यसँग मिलेर हेफकिन इन्स्टिट्युटमा आबद्ध दुईजना पशु चिकित्सकलाई घुस दिए ताकि उनीहरूले ब्याक्टेरिआको कल्चर निकालेर दिऊन् ।
वैज्ञानिक हिसाबले हेर्नका निम्ति बेनोयेन्द्रले बजारबाट मुसा किनेर ल्याए । त्यसपछि दुवैजना आर्थर रोड इन्फेक्सियस डिजिज अस्पताल पुगे जहाँ ब्याक्टेरिआ कल्चर राखिन्थ्यो ।
हत्याभन्दा केही महिनाअघि के भएको थियो ?
अदालती कागजपत्रका अनुसार बेनोयेन्द्रले त्यहाँ उपस्थित अधिकारीहरूसँग आफ्ना चिकित्सक साथीलाई तथाकथित ‘उपचार’का लागि काम गर्ने अनुमति प्रदान गर्न आग्रह गरे ।
यद्यपि यो कुराको प्रमाण छैन कि प्रयोगशालामा भट्टाचार्यले कुनै प्रकारको परीक्षण गरे ।
प्रयोगशालामा काम गर्न पाउने अनुमति पाएको पाँच दिनपछि जुलाई १२ मा भट्टाचार्य अचानक आफ्नो काम सकेर बेनोयेन्द्रसँग कलकत्ता गए ।
प्रहरीले हत्याको घटनाभन्दा तीन महिना पहिला सन् १९३४ को फेब्रुअरीमा ती दुवै जनालाई गिरफ्तार गरे ।
अनुसन्धान अधिकारीहरूले बेनोयेन्द्रका यात्रासँग सम्बन्धित कागजपत्र, बम्बेस्थित होटलका बिल, होटलका रजिस्टरमा उनीहरूका हस्तलेखन, प्रयोगशालालाई पठाइएका सन्देश र मुसा किनिएको पसलको रसिदलाई ट्र्याक गरे ।
सबै विवरणहरूका अनुसार हत्याकाण्ड बारेको सुनुवाइ नौ महिनासम्म चल्यो र त्यो निकै चाखलाग्दो रह्यो । प्रतिवादी पक्षले अमरेन्द्रलाई मुसामा हुने उपियाँले टोकेको तर्क समेत गरे ।
अभियुक्तहरूले बम्बेस्थित अस्पतालबाट प्लेग गराउने ब्याक्टेरिआ चोरी गरिएको उपलब्ध प्रमाणहरूबाट स्पष्ट भएको अदालतले भन्यो ।
र ब्याक्टेरिआलाई कलकत्ता पुर्‍याइयो अनि सन् १९३३ को नोभेम्बर २६ सम्म जीवित राखियो ।
अमरेन्द्रको हत्या गराउनका लागि बेनोयेन्द्रले एक पेशेवर हत्याराको सहयोग लिएको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा अदालतले भन्यो ।
दुवैलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइयो । तर कलकत्ता उच्च अदालतले सन् १९३६ मा दायर पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै मृत्युदण्डलाई आजीवन कारावासमा परिणत गरिदियो ।
सो प्रकरणमा पक्राउ गरिएका अन्य दुई चिकित्सकलाई चाहिँ प्रमाणको अभावमा रिहा गरियो ।
मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेमध्ये एक न्यायाधीशले त्यसलाई ‘आपराधिक इतिहासमा एउटा खास मुद्दा’ भएको टिप्पणी गरेका थिए ।
उक्त हत्याकाण्डसँग सम्बन्धित पुस्तक ‘द प्रिन्स एन्ड द प्वाइजनर’ का लागि शोध गरिरहेका एक अमेरिकी पत्रकार डेन मरिसन भन्छन् ‘बेनोयेन्द्रलाई महारानी भिक्टोरियाको साम्राज्यमा सञ्चालित संस्थाहरूलाई झुक्याउन सक्छु भन्ने लागेको थियो ।’
विश्व इतिहासमा जैविक हतियारको प्रयोग इसापूर्व छैटौँ शताब्दीमा गरिँदै थियो जब असिरियाली शत्रुहरूका भित्तामा एक प्रकारको ढुसी दल्ने गरिन्थ्यो ।
तर अमरेन्द्रको हत्या कैयौँ हिसाबले उत्तर कोरियाली नेता किम जङअनका सौतेनी दाइ किम जङनमको सनसनीपूर्ण हत्याकाण्डलाई सम्झाउँछ ।
मलेशियाको क्वालालम्पुर विमानस्थलमा उडानको प्रतीक्षा गरिरहेका किम जङनममाथि दुई महिलाले स्नायु प्रणालीमा असर गर्ने रसायनले हमला गरेका थिए ।
पछि ती महिलाहरू पक्राउ परे । तर ८८ वर्षअघि कलकत्ताको हावडा स्टेशनमा एक युवा जमिनदारको हत्या गर्ने व्यक्ति र उसले प्रयोग गरिएको अस्त्र अर्थात्‌ सिरिन्ज कहिल्यै फेला परेन ।
तपाईंको मास्क खै ? भन्दै मुख्यमन्त्री सडकमा निस्किए
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही ‘तपाईंको मास्क खै ?’ भन्दै मुख्यमन्त्री सडक निस्किएका
मुगु । हुम्ला लिङ्क रोडको मुगु खण्डमा पर्ने मुगु कणाली नदीमा निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा
हुम्लामा साउनपछि पहिलो पटक कोभिड संक्रमित, एकैदिन आठ जनामा संक्रमण
सिमकोट । हुम्लामा कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरको परीक्षण सुरु भएको छ । जिल्ला अस्पताल हुम्लामा
प्रधानमन्त्री देउवाको दाबी : सरकार सही दिशामा अघि बढेको छ (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार सही दिशामा अगाडि बढिरहेको दाबी गरेका छन् । आफ्नो
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानको कार्यान्वयन, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, विभिन्न पक्षसँग भएका सहमति कार्यान्वयन
सुर्खेत । पछिल्लो समयमा कर्णाली प्रदेशमा कोरोना भाइरस ओमिक्रोन तेस्रो भेरियन्ट तीव्र रुपमा बढिरहेको छ